युक्रेनमा मलेसियाली एयरलाइन्सको विमानमा भएको आक्रमणमा परेकाहरुको शव ल्याउने क्रममा क्वालालम्पुर विमानस्थलमा भावविहल आफन्त । तस्वीरः एजेन्सी
एक पोज है
लस एन्जलसमा भएको एक अवार्ड कार्यक्रममा जोए किङ, टिफनी एडम्स र जमी ब्रेवर । तस्वीरः एजेन्सी
मुस्किल छ पोखरामा !
कास्कीको पुम्दीभुम्दी गाउँका विद्यार्थी फेवातालमा डुंगा खियाएर स्कुल जाँदै । गाउँमा माध्यमिक विद्यालय नभएको र सडकबाट पोखरा आउन घन्टौ लाग्ने हुँदा विद्यार्थीहरु डुंगा चढेर स्कूल जान्छन् । तस्वीरः पुष्प दुलाल/पोखरा
रेडियो नेपालमा पत्रकार महासंघ र कर्मचारी संघ खारेज गर्न पत्राचार
कार्यकारी नर्देशकलाई रेडियोमा प्रवेश निषेध ६ भदौ, काठमाडौं । रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार कार्कीले रेडियो नेपाल कर्मचारी संघको दर्ता खारेजीका लागि श्रम कार्यालयमा पत्राचार गरेका छन् । ट्रेड...
हाम्रा अक्षर राम्रा थिएनन्- रक्षा र स्वर्णिमा
अक्षर राम्रो बनाउन के गर्ने ? अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजित 'विश्व हेन्डराइटिङ प्रतियोगिता’ मा नेपाली छात्राद्वय रक्षा अर्याल र स्वर्णिमा शाक्य विजयी भए । अर्याल कर्सिभ हेन्डराइटिङ र शाक्य आर्टिस्टिक हेन्डराइटिङ...
आइजीपीले गरे ११२ डीएसपीको सरुवा (सूचीसहित)
आकर्षक अड्डामा को-को गए ? ६ भदौ, काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार साँझ १ सय १२ जना प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी)हरुको सरुवा गरेको छ । ९ डिआइजीको एआइजीमा...
तातोपानीको भन्सारमा ८ किलो सुनसहित एक युवक पक्राउ
ज्योती मगरको अन्र्तवार्ता पहिरन भड्किलो भएको भन्दै रोकियो
सिन्धुपाल्चोकका पहिरो पीडितलाई पुनर्वासको माग
बागलुङबाट वाइफाइ चलाउँदै राजधानी सरर !
सुनको भाउ ओर्लिने क्रम जारी, तोलाको ५३ हजार नजिक
बागमतीमा डुङ्गा डुब्दा बेपत्ता भएका २ को शव भेटियो
दैवी प्रकोप पीडितलाई टेलिकमको दुई करोड सहयोग
प्रधानमन्त्रीले भने- मलेसियामा काम गर्ने नेपालीलाई कुनै समस्या नहोस्
नेपालमा लगानी गर्न क्यानेडियन लगानीकर्ता इच्छुक
मंसिर ५ मा राजाको चर्चा
कुन वाणिज्य बैंकको निस्क्रिय कर्जा कति ?
गरिमा भर्सेस नम्रता, कसको बिक्ला स्टारडम ?
मधेस र हिमाल नजोडिने संविधानको काम छैन
६ भदौ, सिन्धुपाल्चोक । नेपाल-चीन नाका तातोपानीको भन्सार गेटबाट ८ किलो सुनसहित एक युवक पक्राउ गरेका छन् । सिन्धुपाल्चोकाको तातोपानी-९ छेदाङ घर भई खासामा...
६ भदौ, काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकका राजनीतिक दलका नेता र उद्योगी व्यापारीहरुले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटी सिन्धुपाल्चोकको जुरेका पहिरो पीडितलाई तत्काल पुनर्वास र नष्ट भएका...
६ भदौ, रौतहट । रौतहटको पि्रपा रजवाडा ७ स्थीत बाग्मती नदीमा बिहिवार साँझ भएको डुङ्गा दुर्घटनामा वेपता भएका ३ मध्ये दुई जनाको शव दुर्घटनास्थल...
६ भदौ काठमाडौं । विस्तार गरेको कर्जा तोकिएको समयमा नउठेपछि आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा १६ वाणिज्य बैंकको निस्त्रिmय कर्जाको मात्रा बढेको छ । सञ्चालनमा...
मोबाइलबाटै गर्भवती र शिशुको निगरानी
सीमा नाकामा इबोला हेल्थ डेस्क अझै स्थापना भएन
भदौभित्रै शिक्षकका लागि नयाँ आवेदन खुल्ने
३५ हजार मानिसबाट नेपाली झण्डा बनाईने
पुल्चोकमा एक युवकको हत्या
६ भदौ, काठमाडौं । नयाँ संविधानका अन्तरवस्तुबारे युवा सभासदसँग छलफल गर्न सिंहदरबारमा बोलाइएको बैठकमा सभासद दूर्गा पौडेलले डा. बाबुराम भट्टराईलाई सोधिन्- ‘संविधानको प्रस्तावनामा धर्मनिरपेक्षतालाई अपरिवर्तनीयबाट...
साना दलका नेताले मागे गाडी सुविधा
६ भदौ, काठमाडौं । सरकारले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ३१ दलका नेतालाई ‘यातायात सुविधा’ भनेर दिएको २० हजार रुपैयाँ थोरै भयो भन्दै साना दलका नेताले...
रुकमाङगद कटवालका बारेमा धेरै कुरा गरिराख्न मनचाँहि मलाई लागेको छैन । म संविधानसभाको चुनाव हुनुभन्दा अगाडि नै, प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा धेरै समय अगाडि नै मेरो...
५ भदौ काठमाडौं । मधेसी बुद्धिजीवीहरुले मधेसमा दुई प्रदेशसम्म बनाउन सकिने बताएका छन् । तर, उत्तर-दक्षिण चिरेको र पहिचानविनाको संघीयता स्वीकार्य नहुने उनीहरुले पुरानै...
एप्पलले बनाउँदैछ चलाउँदा थर्किने माउस
कम्प्युटरमा काम गर्दा अल्छी मानेर माउस चलाउनुहुन्छ ? काम गर्दागर्दा दिक्क लागेर कहिलेकाहीँ माउसलाई टेबुलमा पछार्नुपनि भएको छ होला । निरस माउस प्रतिको तपाइँको विरक्तिको समाधान एप्पलले निकाल्दैछ । एप्पलले यस्तो माउस निर्माण गर्दैछ जसलाई चलाउँदा भाइब्रेसन अर्थात् कम्पन हुनेछ । गेम कन्ट्रोलर जस्तै यो माउसले कति जोडसँग तथा
यदि तपाई ट्वीटर प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने टाइमलाइनमा थप भिडभाड देख्न तयार रहनुहोस् । किनकी ट्वीटरले अब तपाईले फलो नगरेका...
हामीलाई यथार्थमा चाहिएको भनेको आधुनिक जलसंविधान र जलसंघीयता हो । न कि बकम्फुसे संविधान र बकम्फुसे संघीयता । हामी...
यसरी भएको थियो श्रीकृष्णको प्रणान्त
बिजनेस कुन वाणिज्य बैंकको निस्क्रिय कर्जा कति ?
६ भदौ काठमाडौं । विस्तार गरेको कर्जा तोकिएको समयमा नउठेपछि आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा १६ वाणिज्य बैंकको निस्त्रिmय कर्जाको मात्रा बढेको छ । सञ्चालनमा रहेका ३० वटा वाणिज्य बैंकमध्ये गत आर्थिक वर्ष १३ बैंकको निस्क्रिय कर्जा घटेको छ भने एभरेष्ट बैंकको स्थिर रहेको छ ।...
६ भदौ, काठमाडौं । बुर्तिवाङ यातायात व्यवसायी समितिले बागलुङदेेखि काठमाडौँसम्म वाइफाइ सुविधासहितको युरो बस सञ्चालन गरेको छ । यात्रुको सेवा, सुविधा र सहज यात्राका लागि युरो (एसी) बस सञ्चालन
६ भदौ, काठमाडौं । बहुमुल्य धातु सुनको भाउ ओरालो लाग्ने क्रम शुक्रबार पनि जारी रहेको छ । शुक्रबार स्थानीय बजारमा सुनको भाउ तोलामा ४ सय रुपैयाँ घटेको छ ।
पर्वत पुग्यो ‘लोलुफेरा’ पदयात्रा टोली
शुक्रबारका पत्रिकामा बिजनेश खबर
६ भदौ काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमले दैवी प्रकोप पीडितलाई दुई करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । टेलिकमका अध्यक्ष एवं सञ्चार सचिव सुनिल बहादुर मल्लले दुई...
नामकै कारण चर्चामा रहेको चलचित्र ‘श्री ५ अम्बरे’को प्रदर्शन मिति तय भएको छ । दीपा बस्नेतको निर्देशनमा तयार भएको यो सिनेमा मंसिर ५ गते...
दुबै चल्तीका नायिका भएकाले पनि गरिमा पन्त र नम्रता श्रेष्ठको लडाइलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । आजबाट नेपाली सिने बजारमा दुई आशातित सिनेमाले हल...
पीकेको रहस्य खुल्यो, अमिरलाई तनाब
ट्याक्सि चलाउँथे ‘किक’का हिरो
ऐश्वर्याका यी तस्बिरले जोसुकैलाई मन्त्रमुग्ध बनाउछ (फोटो फिचरसहित)
मुम्बई । सिनेमाको पोष्टरको कारण चर्चामा आएको फिल्म ‘पीके’को कथा सार्वजनिक भएपछि अमिर खान तनाबमा छन् । सिनेमाको नयाा पोष्टर संगै कथाको एउटा प्लट...
मुम्बई । ३८ औं जन्मदिन मनाउँदै गरेका अभिनेता रणदिप हुड्डा अहिले दुईटा प्रसंगले चर्चित छन् । पहिलो प्रसंग हो- उनले अभिनय गरेको फिल्म ‘किक’...
लोकगायिका ज्योती मगरको अन्र्तवार्ता रोकिएको छ । एनटीभी प्लसबाट प्रशारण हुँदै आएको ‘टी टाइम’मा उनको पहिरन भड्किलो भएपछि अन्र्तवार्ता रोकिएको हो । उनको छाती केही बढी खुलेपछि रोकिएको जनाइएको छ । कार्यक्रममा निर्देशक एवं...
अमेरिकाको टोलेडो ओहायोमा तीज कार्यक्रम सम्पन्न
अमेरिकाको टोलेडो ओहायोमा कृष्ण जन्माष्टमी तथा तीज कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । टोलेडो क्षेत्रमा रहेका सय भन्दा बढी नेपाली सहभगी कार्यक्रममा श्रीकृष्को पूजा आराधना गर्नुका साथै महिलाहरूले सामूहीक रूपमा नाचेर तीज मनाएका थिए । ...
पानी पर्नासाथ बस्ती छाडेर भागाभाग
नेपालमा भेटिए २ नयाँ प्रजातिका जनावर
बाढीबाट विस्थापित बिरामी पर्न थाले, ज्वरो आउने तथा झाडापखाला लाग्ने धेरै
अब मापसेको मात्रा प्रिन्ट हुने ब्रेथलाइजर
शाखा अधिकृतले नै चलाउँछन् दूतावास